५९ वर्षअघिको विपी माओको त्यो भेटवार्ता(पूर्णपाठ) | दर्पण दैनिक
५९ वर्षअघिको विपी माओको त्यो भेटवार्ता(पूर्णपाठ)
काठमाडौँ । चिनियाँ नेता माओत्सेतुङले ५९ वर्षअघि, १८ मार्च १९६० मा चीन भ्रमणमा रहेका नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालासँग भेटवार्ता गरे। भेटमा माओले चीनविरुद्ध संयुक्त सुरक्षा निर्माण गर्ने भारतको प्रस्तावमा नेपाल सहमत नहुँदा खुसी लागेको मात्रै बताएका छैनन्, भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरु र चीनका प्रधानमन्त्री चाउ एन लाइलाई काठमाडौं निम्त्याउने कोइरालाको प्रस्तावमा धन्यवाद पनि दिएका छन्। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको विवाद समाधान गर्न कोइरालाको अडानमा लचिलो पनि देखिएका छन्, माओ। वीपी र माओबीचको त्यो दुर्लभ वार्ता चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो पुस्तक ‘माओत्सेतुङ अन डिप्लोमेसी’ मा प्रकाशित गरेको छ। वीपी–माओबीचको त्यो भेटवार्ता नै वास्तवमा यस्तो एउटा विन्दू थियो, जसले नेपाल–चीन सम्बन्धको जग बसाउने काम गर्यो।
वीपी: आधिकारिक सीमा चिन्ह आवश्यक छ।
वीपी: यो विचार गर्न लायक कुरा हो।
वीपी: हाम्रो कुराकानीमा प्रधानमन्त्री चाउ एन लाइले मैत्री सन्धिको मस्यौदा अघि सार्नुभएको थियो। त्यो मस्यौदालाई पहिले हामीले मन्त्री परिषदबाट पास गराउनुपर्छ। त्यसमा केही संशोधन हुनसक्छ। सायद यसमा प्रधानमन्त्री चाउ एन लाइको अप्रिल अन्तिममा भारतपछिको नेपाल भ्रमणका क्रममा काठमाडौँमा हस्ताक्षर हुनसक्छ।
वीपी: हामी धेरै मान्छे पठाउँदैनौँ किनभने हामी धेरैको खर्च धान्न सक्दैनौँ।
वीपी: होइन। हामी दुई वर्ष अगाडि चाहिँ त्यो राजमार्ग बनाउन चाहन्थ्यौँ। तर कोषको अभावका कारण काम अघि बढ्न सकेन। अहिले सोभियत संघका प्राविधिकहरुले पूर्व–पश्चिम राजमार्गको सर्वेक्षणमा सघाइरहेका छन्।
वीपी: होइन। हामी नेपाल र तिब्बतबीचको हिमाल नाघेर आउन सक्छौँ। तर त्यो औपचारिक मार्ग होइन।
वीपी: हाम्रो देशमा हामीले आर्थिक विकासको सम्भावना भएको क्षेत्रमा सडक बनाइरहेका छौँ। देशभर हामीले ९ सय माइल (१३०० किमी) सडक निर्माणको योजना बनाएका छौँ।
वीपी: मैले जवाहरलाल नेहरु र प्रधानमन्त्री चाउ एन लाइलाई वार्ताका लागि हाम्रो राजधानी काठमाडौँमा निम्त्याएको थिएँ। तर उहाँहरु आउन सक्नुभएन।
वीपी: त्यस्तो भएको छैन, त्यसैले त हामीले वक्तव्य जारी गर्यौं।
वीपी: नेपाल–चीन सीमाको विषयमा अझै फरक मत छन्। हाम्रो दृष्टिमा विगत ५० वर्षको ऐतिहासिक परिस्थितिलाई आधार मान्दा चार स्थानमा विवाद छ। अब विवाद टुंग्याउने समय हो।
वीपी: प्रधानमन्त्री चाउ एन लाइसँगको कुराकानीमा हामीले अनेकौँ सिद्दान्तको कुरा गर्यौं। पहिलो, परम्परागत रुपमा स्वीकार्य विद्यमान सीमा रेखा कोर्ने, दोस्रो, सीमाको दुवैतर्फबाट क्षेत्राधिकारीको व्यवहारिक परिस्थिति मूल्यांकन गर्ने, तेस्रो, केही स्थानमा विवाद समाधान गर्ने र विवाद समाधान हुन नसके संयुक्त समितिमा हस्तान्तरण गर्ने।
वीपी: हामीबीचका खासखास स्थानमा विवाद भएकाले यी सिद्दान्तहरु ठीक छन्। विवादले हामीलाई असहज बनाएको छ। हाङझाउ जाँदा मैले प्रधानमन्त्री चाउ एन लाइलाई भनेँ, म असहज मनस्थिति लिएर हाङझाउ आएको छु। प्रधानमन्त्री चाउले मलाई पूर्ण रुपमा सहज महसुस गर्न भन्नुभयो।
वीपी: यहाँ आउनुअघि मैले प्रधानमन्त्री ने विन (बर्माका तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री) लाई भेटेको थिएँ। उहाँले अध्यक्ष माओ र प्रधानमन्त्री चाउ एन लाइसँग स्पष्टसँग कुरा गर्न भन्नुभएको थियो। त्यसैले मैले यी सबै कुराबारे खुलेर बोलेको छु।
वीपी: हाल विवादित स्थानहरु तपाईंका लागि महत्वपूर्ण छैनन्। तर हाम्रो लागि ती महत्वपूर्ण छन्। यो प्रतिष्ठको विषय हो।
वीपी: अर्को पनि प्रश्न छ, भावनाको प्रश्न। यसलाई हामी सगरमाथा भन्छौँ, पश्चिमाहरु एभरेस्ट भन्छन्, तपाईंहरु चोमोलोङ्मा भन्नुहुन्छ। यो स्थान सँधै हाम्रो सीमाभित्र छ। तर प्रधानमन्त्री चाउ एन लाइले यो तपाईंहरुको सीमाभित्र पर्छ भन्नुभयो।
वीपी: यो भावनात्मक प्रश्न हो।
वीपी: हिमालको चुचुरो चाहिँ?
वीपी: अरु विवाद पनि छन्।
वीपी: हाम्रो त केही वर्ग किलोमिटर मात्रै हो।
वीपी: ठीक छ। अन्य पाँच विवादित स्थान छन्। जसमध्ये तीन स्थान मुख्य छन्।
वीपी: बेइजिङको वार्तामा समाधान गर्न सकिएन भने यो कुरालाई हामी तपाईंसामु कसरी राख्न सक्छौँ?
वीपी: हामी पनि आशावादी छौँ।
वीपी: सूर्यप्रसाद उपाध्याय: हो।
माओः हामी आफ्नो मनस्थिति सहज बनाउन चाहन्छौँ, ताकि हामी चीनलाई आधुनिक उद्योग, कृषि, विज्ञान र राष्ट्रिय सुरक्षासहितको देश बनाउन सकौँ। तपाईंले पनि आफ्नो देशमा त्यस्तै गर्नका लागि सहज महसुस गर्न आवश्यक छ। यो राम्रो कुरा हो। होइन त? स्रोत : नेपालखबर